Amalahle Amalahle, Ama-Grill Grill, Umakhi Wamagesi Kagesi | Umthombo
Nikeza Isixazululo Sonke
Ukugxila kwe-Wellsure ekuhlinzekeni isisombululo sonke esikhundleni sokukhiqiza okuhlanganisa ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nesevisi eyodwa.
Ama-Grill wethu Wamalahle, amaGrill Grills, Imikhiqizo YamaGrill kagesi
Okujabulisa Amakhasimende Wethu.
WST - 019 kuhhavini we-pizza
WST - 019 kuhhavini we-pizza. Umkhiqizo usezingeni eliphakeme futhi unokusebenza okuthembekile ngamanani wokuncintisana.
I-WST-005. Ukuqinisekisa ikhwalithi, abahlinzeki bayo bezinto ezingavuthiwe bahlolwe ngokuqinile futhi yilabo kuphela abahlinzeki abahlangabezana namazinga omhlaba abakhethwa njengabalingani bamaqhinga besikhathi eside.
I-Wst-021 i-burner gas gas / yangaphandle ekhishini yokubuyekeza uchungechunge
I-Wst-021 i-burner gas gas / yangaphandle ekhishini yokubuyekeza uchungechunge. Lo mkhiqizo uthengiselwa amazwe amaningi kanye nesifunda.
I-grill eyakhelwe ngaphakathi HS-20200811 / Wst-021 ihovini yegesi emibili
I-grill eyakhelwe ngaphakathi HS-20200811 / Wst-021 ihovini yegesi emibili. Umkhiqizo uqukethe ikhwalithi ephezulu yokuthungwa. Iteyipu yokulinganisa izosetshenziselwa ukubala nje inani lezitishi nge-intshi okungenani izingcezu ezimbili ngesitayela ngasinye ukuqinisekisa ukunemba kokuqina.
Nikeza Ngezifiso Insizakalo.
Uma ungawutholi umkhiqizo owenziwe ngomumo ofanele iphrojekthi, vumela ama-grills amalahle ka-Wellsure, ama-grills kagesi, insiza yokwenza ngokwezifiso ye-grills ikusize uthole umkhiqizo ofanele phakathi kwezinsuku eziyi-7 ngaphandle kokunikela ngesikhathi sokumaketha noma izinzuzo zokwenza ngokwezifiso.
Ngamandla nokusebenza kahle, singanikeza ukucubungula kwe-OEM / ODM ngokuya ngombono wamakhasimende noma ukunikezwa. Siphinde sibe nokuphathwa okunekhono futhi sidlule i-ISO9001, CE, isitifiketi se-CSA, ngakho-ke siyaqiniseka ukunikeza amaklayenti ethu imikhiqizo ehamba phambili nezixazululo ezifanele. Samukela wonke amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba.
Uma ungawutholi umkhiqizo owenziwe ngomumo ofanele iphrojekthi, ake sinikeze insizakalo eyenziwe ngokwezifiso ukukusiza ukuthi uthole umkhiqizo ofanele phakathi nezinsuku eziyi-7.
Ikhasimende lazise ngesimo sefomu esidingekayo, imininingwane yokusebenza, umjikelezo wempilo nezidingo zokuhambisana.
Ithimba lokuklama liyabandakanyeka kusukela ekuqaleni kwephrojekthi ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo owenziwe ngokwezifiso ulungele izidingo zamakhasimende.
Ukuze sinikeze isakhiwo sekhwalithi ephezulu, sigcina uhlelo olusebenzayo lokuphathwa kwekhwalithi.
Lapho uhlobo luqinisekisiwe ngokwendlela, umsebenzi, nezidingo, ukukhiqizwa isigaba esilandelayo.
Imikhiqizo yethu Inqobile Izitifiketi Eziningi Ngokwemigomo Yekhwalithi Nokusungula.
IZhongshan Wellsure Metal Products Co., Ltd.
IZhongshan Wellsure Metal Products Co., Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2003, sisebenza ngemikhiqizo ye-aluminium, ifenisha yangaphandle, amalahle, ama-grills kagesi, ama-grills wegesi akhelwe ngaphakathi, amakhishi angaphandle, amathe okugoqa amathe, abenzi benkomo ne-pizza, ama-grills kagesi, umgodi womlilo, ababhemayo, amathuluzi we-kamado ne-BBQ Njll .
Imboni ye-Wellsure ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-63333. Sine uhla egcwele izikhungo zokukhiqiza eziphambili nemishini yokuhlola, kufaka phakathi indawo yokusebenzela enokusika, ukugxusha, ukugoba, ukutomula, ukuwelda, ukwelashwa kwendawo namandla okuhlangana. Sineqembu lobunjiniyela elinolwazi olungaphezulu kweminyaka eyi-10 lokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukile. Sigxila kwisisombululo sonke ekuhlinzekeni hhayi kuphela ukukhiqiza kepha sihlanganisa ukwakhiwa, ukukhiqizwa, ukuthengisa kanye nesevisi eyodwa.
Ngokusebenza kahle kanye nesipiliyoni, singanikeza ukucubungula kwe-OEM / ODM ngokuya ngemibono yamakhasimende noma imidwebo. Siphinde sibe nokuphathwa okunekhono futhi sidlule i-ISO9001, CE, isitifiketi se-CSA, ngakho-ke siyaqiniseka ukuthi singanikeza amaklayenti ethu imikhiqizo emihle nezixazululo ezifanele.
Ama-grill ethu amalahle, ama-grills kagesi, imikhiqizo kagesi yamagrill ithunyelwa kakhulu e-United States, Australia, Europe naseNingizimu Afrika. Samukela wonke amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba.
Iminyaka eyi-17 +
Ngaphezulu kweminyaka engu-17 'unjiniyela iqembu abanolwazi.
Ikhwalithi ethembekile yokuhlangabezana namakhasimende ethu.
I-WST-011 Oven lefoni
Ihhavini lefoni le-WST-011